Tsvaga Rubatsiro - Galveston County Chikafu Bhangi
Kana iwe kana mumwe munhu waunoziva ari kutsvaga rubatsiro rwechikafu, shandisa mepu iri pazasi kuti uwane nzvimbo padhuze newe.
Zvakakosha: Tinokukurudzira kuti utaure nesangano usati washanyira kuti usimbise maawa avo nemasevhisi aripo. Ndokumbira utarise kendendende yemahara pasi peMepu kuti utarise nguva nenzvimbo zvekugoverwa kwechikafu chemafoni.
Iva Sisitimu Inotora chikamu
Dzvanya bhatani pazasi kurodha application agency yedu kuti ive nyowani yekudyira chikafu, nhare kana saiti yekudya.
Mobile Chikafu Rori
Kugoverwa kwechikafu chemafoni kunoitika kune vanobatirana nzvimbo saiti kuburikidza neGalveston County pamazuva akafanotarwa mazuva uye nguva (ndapota ona khalendari). Izvi zvinotyaira-kuburikidza nezviitiko apo vanogamuchira vanonyoresa kuti vagamuchire zvakawanda zvekudya zvinovaka muviri. Nhengo yemhuri inofanirwa kunge iripo kuti igamuchire chikafu. Chitupa kana magwaro ari NOT inofanirwa kuenda kunogoverwa chikafu chinofamba. Pamibvunzo, ndapota email Kelly Boyer.
Kunyoresa / Check-In kunopedzwa kunzvimbo yenharembozha panguva yekushanya kwega kwega.
Kuti uwane chinyorwa chinodhindwa chekarenda, ndapota tinya bhatani pazasi.
Gunyana 2021 Nhare yeKugovera Yekufambisa